I-Roulette elihle kakhulu Real Real Casinos Online - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Roulette
Uma udlala iRoulette ngemali yangempela
Yini iRoulette Online?
Ungawina kanjani eRoulette – Iqoqo Lezindatshana
Mayelana ne-American Roulette
Mayelana ne-European Roulette
Konke odinga ukukwazi nge-Online Roulette!
Akunasethi yemithetho ehlukanisa umuntu ogembulayo omuhle kumuntu ompofu. Kukhona, nokho, iziphakamiso zokuthi ungadlala kanjani ngokuziphendulela. Okucatshangelwa okuthathu okuvame kakhulu kufaka phakathi ukusetha isabelomali, ukusungula umklomelo wokuwina, nokugcina ukuqonda kwakho ngawe.
Ngaphezu kwakho konke okunye, kubalulekile ukusetha imikhawulo ekusebenziseni kwakho imali. Ngaphandle kwalokho, unesibopho sokusebenzisa ngokweqile. Ukuqinisa umgomo wokuwina kubaluleke ngokufanayo. Ngokwenza njalo, uhlala ugxile kwelaser emgomweni wakho ngenkathi unesibopho. Ekugcineni, kuyalulekwa ukuthi ungadlali ngenkathi udakiwe. Utshwala buzokhubaza izinzwa zakho kuphela, futhi ukusebenzisa ngokweqile kuzoholela ekudlaleni umdlalo ngokunganaki.
Ngokungangabazeki, akukho lutho olungathatha indawo yenjabulo, ukwenza izinto obala, nokwaneliseka okuza ne-roulette ebukhoma. Kodwa-ke, kunokuthile okusondela – bukhoma i-roulette online. Ngakho-ke khohlwa ongase ukuzwe, nayi imininingwane enamanzi ukukusiza ukuthi uqale ngokushesha.
Okokuqala, abashayayo babeka ukubheja ngokukhululekile kusistimu ngaphambili. Futhi uma kwenzeka unanoma yimiphi imibuzo mayelana nomdlalo, babhalele umbhalo, bazokuphendula ngokuphakelayo okubukhoma kwe-HD ngesikhathi esifanele. Uma kukhona igama elilodwa lokuchaza lokhu kuhlangana phakathi kobuchwepheshe namakhasino, kungaba ngobuhlakani.
Lapho i-roulette ingena engxoxweni, isondo alikaze lisalele kakhulu emuva. Kuthatha isigaba esiphakathi futhi kwehlukanise abahlulekile kwabaphumelele. Ngezizathu eziningi, kunezinhlobo ezimbili ezihlukene zamasondo e-roulette. Eyodwa inezikhala ezingama-37 kanti enye inama-38, kepha zonke izinombolo zifinyelela ku-666 – ziyinqaba, akunjalo?
Imvamisa, izinombolo zinemibala ebomvu nemnyama ngokungafani, kanye nendawo eyodwa noma ezimbili eziluhlaza okweqanda noziro ophindwe kabili. Lokhu kulungiselelwa kuhlala kuma-bearings amabili abekwe ngokucophelela enza kube lula ukuzungeza okungenamthungo futhi kunquma nokusebenza kahle kwesondo. Bese kuba nebhola le-roulette elincane eliqedela isethi.
Isu leMartingale Roulette
Izinkinga zeMartingale Roulette
Isu leLabouchere Roulette
Isu le-D’Alembert Roulette
Isu seFibonacci Roulette
Isu seParoli Roulette
Abaphenyi e-US bafunga i-roulette yaseMelika ngenkathi abase-Europe bevame ukuyigwema. Lokho kucela umbuzo: Kungani? Okokuqala, iza nezikhala ezimbili eziluhlaza (0, 00), okwenza kube nzima kakhulu ukuthola ama-hits. Kepha lokho akuvimbanga abadlali kulo lonke elase-US ekuthandeni, futhi bakudlale njalo.
Ngokungafani neminye imidlalo yasekhasino, ukwenza i-roulette yaseMelika kususelwe ethubeni. Awekho amaqhinga namasu ake asebenze, ngaphandle kokuthi umdlali obukhali abone isondo elibandlululayo. Kepha lapha, ukubheja kuyafana neminye imidlalo ye-roulette. Ngakho-ke uma ukwazi ukudlala eyodwa, i-roulette yaseMelika akufanele ibe yinkinga.
Umehluko omkhulu phakathi kwe-roulette yaseYurophu neyaseMelika yinombolo yama-zero slots kwisigaxa. Uhlobo lwaseYurophu lunoziro owodwa, futhi ngokusho kwabaphenyi, lokho kunciphisa kancane umkhawulo wendlu. Ngaleso sizathu, abashayayo emhlabeni wonke bathanda le nguqulo – iningi labo livela eYurophu.
Ngokwethembeka, amakhasino ambalwa kuphela awanalo isondo le-roulette laseYurophu – ngoba nje linenzuzo (endlini) futhi ajabulisa nabahlaseli. Ngakho-ke uma uzibuza ukuthi yiliphi isondo le-roulette elingcono phakathi kwalokhu okubili, iya kunguqulo yaseYurophu. Ngaleyo ndlela, ikhasino lizoba nomphetho ongu-2.63% ngaphezulu kwakho.
Ngakho-ke, ungadlala kanjani futhi kuphi i-roulette? Impendulo incike kokuthandayo. Kukhona izinketho zezitini nezemoto, amakhasino aku-inthanethi nokuhlanganiswa kwalokhu (i-roulette ebukhoma online). Ukuze uthole imiphumela emihle, thola izibuyekezo zomsebenzisi ezinkundleni zokuxhumana eziku-inthanethi nezinjini zokusesha ngezincomo.
Kepha uma umusha ngokuphelele kulo mdlalo, zingela ama-spins wamahhala kuqala. Bazokunikeza umbono omubi wokuthi yini ongayilindela kulo mdlalo futhi bakwenze uzethembeke endleleni. Ukusuka lapho, ungenza idiphozi yokuqala bese ubona ukuthi kwenzekani. Ngikufisela inhlanhla!
Ingabe Uhlelo Lokubheja Lwe-Roulette Luyasebenza?
I-Roulette ngumdlalo wenhlanhla. Ngoba u-7 Omnyama ophuma nge-spin eyodwa ngeke abe nomthelela ku-spin elandelayo. Lokhu okushiwoyo impendulo yombuzo imane nje ibekwe, cha. Lezi zinhlelo zokubheja zeRoulette azisebenzi. Uma ubheja ku-Roulette spin ubheja ngengozi.
Ingabe Zikhona Izinzuzo Zokudlala I-Roulette Online?
Awudingi ukuya eLas Vegas. Uzobe unethezekile ekhaya lakho noma lapho unokuxhumana kwe-inthanethi khona. Futhi, ngeke sibe khona isidingo sokuthatha ikhefu emsebenzini. Mane nje ungene ngemvume bese udlala, kulula kanjalo. Esikhathini esiningi ukubheja okuncane kuncane kakhulu ngeRoulette eku-inthanethi. Uma ungathandi ukuthi inhlanhla yakho ihamba kanjani ekhasino elilodwa, ungashintsha amakhasino ngokuthepha okumbalwa noma ngokuchofoza.
Ingabe indlu inenzuzo nge-zero no-zero ophindwe kabili?
Ikhasino likhokha amathuba okuba u-1: 35. Ukube ubungabheja u- $ 1 kunombolo ngayinye kanye no-zero no-zero ophindwe kabili, uzophuma nokulahleka kwe- $ 2. Ngale ndlela indlu inenzuzo ngalezo zinombolo ezingeziwe ze-2 ebhodini le-Roulette.
Ngenze Idiphozithi futhi iRoulette ikhishiwe kwiBhonasi, Ngani?
Ayikho ikhasino ezokuvumela ukuthi usebenzise imali yakho yebhonasi kuRoulette. Akekho kubo othi kungani ngemigomo nemibandela. Ukuphela kwento esingacabanga ukuthi umdlali uzoba nenzuzo eRoulette futhi asule ibhonasi yenzuzo. Lokhu akuyona into ekhasino ethanda ukwenzeka.
Ingabe Kusemthethweni Ukuba Nesondo Le-Roulette?
Lokhu kuzoncika ekutheni uhlala kusiphi isimo nokuthi imiphi imithetho esifundazweni sakho. Kwesinye isikhathi, iziphathimandla azinandaba uma unemishini yekhasino. Umthetho kuphela ukuthi le mishini yekhasino ayikwazi ukudlalwa. Futhi, kufanele kubhekwe njenge-antique.
Ingabe i-Online Roulette Mahhala?
Ungahlala usebenzisa i-akhawunti yakho kumodi yokusebenza. Iningi lamakhasino aku-inthanethi anemodi yokuzijwayeza. Yilapho abakunikeza khona imali engenabungozi yokudlala mahhala. Ngalo mqondo kuphela lapho ungadlala khona i-Roulette eku-inthanethi mahhala.
Yiziphi Izeluleko Zokubheja Okuhamba phambili ku-Roulette?
Umngcele wendlu uzohlala ufana. Ukubheja okuhle kakhulu ku-Roulette kuvamise ukuhlanganisa ukubheja. Ukubheja kokubili okubomvu nokumnyama. Ukubheja kokungalingani nokulinganayo. Ukubheja kuwo wonke u-1-18 no-19-36. Kwazi bani ukuthi ungaphuma phambili.
Ingabe kukhona Ukubheja Okubi Kunakho Konke Okufanele Kwenziwe ku-Roulette?
Uma ubheja ngenombolo eyodwa kuphela, amathuba akho wokuwina mancane kakhulu. Kodwa-ke, uma ungumuntu wesithupha ukubeka ukubheja kwakho, izingqinamba zakho zingcono kakhulu. Umngcele wendlu uyafana noma ngabe kunjani.
Ingabe Imidlalo Yama-Roulette Ekwi-inthanethi Ingathenjwa?
Okuwukuphela kwamakhasino aku-inthanethi wonkana athembekile ngamakhasino asemthethweni. Lawa makhasino azosebenzisa inombolo engahleliwe eyakhiwe ukukhetha inombolo ibhola eliwela kuyo.
Ingabe Zikhona Izinhlobo Zezinhlobo Zokubheja Abantu Abazisebenzisa Ku-Roulette?
Kunezinhlobo eziningi zezinhlelo zokubheja umuntu angazisebenzisela iRoulette eku-inthanethi. Isistimu ngayinye yokubheja izokunikeza umbono ojwayelekile wokuthi ungakulungisa kanjani ukubheja kwakho kanjani futhi nini. Kufanele wazi ukuthi alukho uhlelo lokubheja lapho ungashaya khona ikhasino isikhathi esiyikhulu ngamaphesenti. Kungcono ukusebenzisa uhlelo lokubheja kwezokungcebeleka kuphela.
Yini Amakhasino Amahle weRoulette Online?
Kunamakhasino aku-inthanethi amaningi kakhulu. Ngamunye wabo unikela ngeRoulette. Uma ufuna ukuqala bheka izibuyekezo zabanye. Lokhu kufanele kukunikeze umbono omusha wokuthi iyiphi ikhasino eku-inthanethi engazifanela kahle izidingo zakho nezifiso zakho zomdlalo we-Roulette online.
Ngabe Abantu Bangaziphilisa Ngokudlala I-Roulette?
Ngempela ayikho indlela yokushaya umdlalo. Uma ungaguqula izingqinamba uvune wena uphume phambili, bengizodlala iRoulette ukuze ngiphile. Ngicabanga ukuthi kuzoba nabantu abaningi abazokwenza lokho.
Ingabe Ikhona Inkathi Yobuningi Bokudlala I-Roulette eku-inthanethi?
Amakhasino amaningi aku-inthanethi adinga ukuthi ube yi-18 kuphela. Kunamakhasino aku-inthanethi ambalwa kakhulu adinga ukuthi ube yi-21. Okokuqala uzodinga ukufunda imigomo nemibandela yekhasino ocabanga ukuyidlala.
Ingabe Kukhona Umehluko Phakathi Kwe-American, European, neFrance Roulette, What?
Umngcele wendlu umehluko omkhulu phakathi kokuhluka okungu-3. Isondo laseMelika iRoulette lineziro eliphindwe kabili kulo, kanye neqanda elilodwa. Isondo laseYurophu nelaseFrance lineziro elilodwa kuphela. Umngcele wendlu enguqulweni yaseMelika imvamisa u-5.26. Enguqulweni yaseYurophu, ingu-2.7. Uhlobo lwesiFulentshi luzokhokhela abadlali uhhafu wokubheja kwabo uma ibhola liwela ku-zero. Umngcele wendlu yenguqulo yaseFrance ngu-1.35.
Ingabe kukhona iRussia Roulette? Ingabe ingadlalwa ku-inthanethi?
I-Russian Roulette idlalwa ngesibhamu. Akuwona umdlalo wekhasino. Labo abadlalayo bagembula ngezimpilo zabo ukuthi isikhathi abazidonsela ngaso ngeke kube yisikhathi lapho isibhamu sihamba khona ekhanda labo.
Ingabe Kusemthethweni Ukusetshenziswa Kwesistimu Yokubheja? Ngingayisebenzisa iMartingale?
Izinhlelo zokubheja azisebenzi ngokuvamile. Kodwa-ke, uma uzizwa ukhululekile ukubheja ngeMartingale ungakwenza lokho. Zisemthethweni ngokuphelele. Vele ungakhohlisi.
Uma Ngisingatha iRoulette neBlack Jack Night Ngingayenza Imali?
Kufanele uwine. Kepha, kunomphetho wendlu encane kuphela yomibili imidlalo. Ungahle ufune ukuthola okwanele ukumboza noma yikuphi ukuwina kwabadlali, uma kungenzeka.
Ungakuwina Kangakanani Ukubheja Okumnyama Noma Okubomvu ku-Roulette?
Ngokuhamba kwesikhathi, uzolahlekelwa yimali. Ukubheja ngokubomvu noma mnyama kuphela kusho ukuthi unethuba lokuwina elingama-50%. Izimo ziphikisana nawe futhi uzowina into efana no-47% wesikhathi. Ngakho-ke, impendulo emfushane yalo mbuzo ayilutho.
Ingabe Zikhona Izimo Zanoma iyiphi Inombolo Eyodwa kuRoulette?
Lokhu kuya ngokuhlukahluka kweRoulette oyidlalayo. Ukwehluka kwe-Europe ne-French kuno-1: 37, kanti ukwahluka kweMelika kuno-1: 38
Kuyini i-Live Roulette? Isebenza kanjani?
Awukwazi ukudlala iRoulette ebukhoma mahhala. I-Video Roulette izoba kusikrini sevidiyo, kufana nomshini we-slot. Umdlalo we-Roulette obukhoma uzoba nomthengisi emi etafuleni elungele ukudlula kuwe ibhola. Ikhasino izodinga ukukhokha umthengisi wayo.
Hlobo Luni Lokuziphatha Okudingayo KwiRoulette Ebukhoma?
Ngokuyinhloko, kufanele ugweme ukudakwa ngokweqile. Akekho ofuna ukuhlala etafuleni le-Roulette nomuntu onomsindo futhi ocasulayo. Uma ubhema, kufanele ulinganisele inani losikilidi obhemayo. Futhi, landela imithetho yomthengisi. Umthengisi uzokwazisa uma sekuyisikhathi sokubheja futhi lapho kungasekho ukubheja okungenzeka. Futhi, ungakhohlwa ukucebisa umthengisi. Yazi imithetho nolimi lomdlalo.